News – Wakaaladda Xoogga Korantada Ummadda ENEE
Shirkadda xooga korantada ummada eneeya ayaa dib uu hagajin ku samaysay balayasha korantadda
Shirkada xoga korantada ummada eneya aya dib uu hagajin ku samaysay balayasha korantadda ee magalada bosaso garahan xafada biyo kulule, Waxaa aya dib uu hagajin xogo leh ku sameyn wadada dheer oo ka bilamata Dr. rooble ilaa iyo xafada rafa iyo raxo, Waxaa ay hagajiyena dhaman balayasha Korantada oo dhan. […]
wakaaladda xooga korantad ummadda oo raashin gaarsiisay jeelka magalada bosaso.
shirkadda eneeya iyo psawen ayaa raashin gaar siiyey dadku xiran jeelka wayn ee magalada bosaso . waxay ugu talagaleen bisha ramadaan in ay ku afuraan dadka ku xiran jeelka ay la qabsadan farxada afurka dadkaas mesha ku xiran. xalfada ay ku wareejiyey raashin ka waxa ka […]